घाटमा शव अन्त्यष्टि गर्न नदिएपछि भयो यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > घाटमा शव अन्त्यष्टि गर्न नदिएपछि भयो यस्तो!
सिन्धुली । निधन भएका ब्यक्तिको शव अन्त्यष्टिको तयारी गर्दा स्थानियले विरोध गरेपछि फर्काएर लगिएको छ । सिन्धुलीमा यस्तो घटना भएको हो । कोरोनाका कारण निधन भएका ब्यक्तिको शव नेपाली सेनाले अन्त्यष्टिको तयारी गर्दा स्थानियले विरोध गरेका हुन् । बिहीबार निधन भएका सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ५ जरायोटारका ४८ वर्षीय एक पुरुषको शव अन्त्येष्टि गर्नेक्रममा स्थानीयले अवरोध गरे पछि फर्काएर अन्यत्रै लगिएको छ ।
नेपाली सेनाले कमलामाई नगरपालिका ५, ६ र ७ को संगमस्थल गडौंली घाटमा अन्त्येष्टिको तयारी गरेको थियो । तर संक्रमितको शव ल्याउन लागेको भन्ने थाहा पाएका स्थानियले शव नपुग्दै घाटमा पुगेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए । शव ब्यवस्थापनको लागि सेनाले खा ड ल समेत बनाएको थियो । तर स्थानियले अन्त्यष्टि गर्न दिएनन् । खाल्टो खन्न लगेको मेसिन स्थानियले क ब्जा गरेर विरोध जनाएका थिए ।
प्रहरी माथि नै स्थानिय जाइलाग्न थालेपछि शव फर्काएर लगिएको हो । घाटमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरेपनि स्थानीयले चर्को विरोध गरेपछि शवलाई फर्काएर कमलामाई नगरपालिका ५ स्थित ढाक्रेबास खोलामा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । फाइल तस्बिर
बाइडेनले बनाए इतिहास
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उमेद्वार जो बाइडेनले इतिहास बनाएका छन् । उनले इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर इतिहास बनाएका छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनको जारी मतगणनामा बाइडेनले इतिहासमै बढी सात करोड २० लाख लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका हुन् ।
यसअघि सन् २००८ मा बाराक ओबामाले ६ करोड ९४ लाख ९८ हजार पाँच सय १६ मत प्राप्त गरेका थिए । यो लोकप्रिय मत नै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्राप्त सबैभन्दा बढी थियो । हालको निर्वाचनमा बाइडेनले यो रेकर्ड तोडेका छन् ।